Global Voices teny Malagasy » Tonga ao Azia atsimo-atsinanana noho ny doro ala mamaivay ao Indonezia indray ny zavon-tsetroka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Septambra 2015 5:14 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Malezia, Singapaoro, Fahasalamàna, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana, Voina
Petronas Twin Towers ao Malayzia sy ny buildings [fanorenana] manodidina kendan'ny zavo-tsetroka matevina avy amin'ny doro ala ao amin'ny faritra mihatra ao Kuala Lumpur, Malayzia. Sary avy amin'i Muhammad Shafiq Mohd Zain, Copyright @Demotix (9/12/2015)
Miteraka zavo-tsetroka ao amin'ny lanitr'i Indonezia no doro ala mitranga ao amin'ny firenena ary mahazo an'i Malayzia sy Singapore ihany koa izany setroka izany. Olana mpitranga isan-taona  ao amin'ny faritra Aziatika atsimo atsinanana izany toe-javatra izany, iampangana ny haintany sy ny tavy ataon'ny orinasam-panaovana menaka voanio ao amin'ny faritra andrefan'i Indonezia.
Tamin'ity taona ity dia nohamafisin'ny kaontin'ny filoha Indoneziana, Jokowi Widodo, fa doro ala no anton'ny zavo-tsetroka :
Tamin'ny maraina aho nanara-maso mivantana ny fifehezana ny afo tamin'ny ala tao Banyuasin, S. Sumatra. Tsy miraviravy tanana – Jkw
Taorian'ny fitsidihany tao Sumatra atsimo, dia nanome baiko ny isamborana ireo tompon'andraikitra tamin'ny fandoroana ny ala ny Filoha. Ankoatra izay, dia nanome toromarika ireo sampan-draharaham-panjakana ny filoha hanaisotra ny fahazoan-dalan'ireo orinasam-panaovana menaka voanio nandrava ala tao amin'ny faritra. Nanazava tao amin'ny pejy Facebook ny filoha Widodo rehefa avy eo :
Nanaramaso ny voina nateraky ny zavo-tsetroka aho. Sumatra atsimo no tena nahitana betsaka indrindra ny fototry ny afo. Saingy androany dia 321 nidina ho 129 ny isan'ny toerana niaingan'ny afo. Tamin'ny herintaona, nandrava velarantany 8000 hekitara ny doro ala; tamin'ity taona ity dia nihena 1000 hekitara izany.
Tsy azo leferina intsony ny fandoroana ala. Efa hitantsika ny antony sy ny vahaolana. Izay orinasa manakarama olona hanao tavy [manala ny ala] dia tokony esorina aminy ny lisansa fahazoan-dalany ary entina any amin'ny fitsarana izy ireny.
Amin'ny manaraka, tsy maintsy atao laharam-pahamehana ny fepetra fisorohana.
Araka ny Foibe Fikarohana Iraisampirenena momba ny Ala, dia noho ny asan'olombelona amin'ny ankapobeny no mahatonga  ny fahamaizan'ny ala. Ny tavy [tevy ala] no fantatra fa fomba mora atao sy mora vidy indrindra ataon'ny orinasam-panaovana menaka voanio hanadiovana ny toerana. Saingy araka ny lalàna indoneziana miompana amin'ny ala No. 41/1999 toko 50 andininy 3d, mety higadra hatrany amin'ny 15 taona ny olona iray mahatonga fahamaizana ala. Io no mipetraka ao amin'ny lalàna tian'ny filoha ampiharina ara-bakinteny.
Nofoanana ny zotra ara-barotra tgany Pekanbaru, renivohitry ny faritanin'i Riau, izay ahitana ny ‘ground zero’  amin'ny fahamaizan'ny ala. Mandritra izany fotoana izany dia mbola miitatra ihany ny toerana iaingan'ny afo ao Kalimantan (zaratany Indoneziana ao amin'ny nosy Borneo).
Miitatra ny fahamaizan'afo, voaodidina fototr'afo 1274 i Kalimantan.
Maro ny fototr'afo tsikaritra tao Kalimantan androany.
Setroka avy amin'ny fahamaizan'ny ala ao Rengat Inhu Riau. Efa voafehy ny afo fa nisy namelona indray.
Ao amin'ny pejy Facebook-ny ny Greenpeace Indonesia no nanambara  ny fahafatesan'ny zazavavy 12 taona noho ny fahasarotam-pisefoana vokatry ny setroka. Efa nokarakaraina tao amin'ny hopitaly nandritra ny herinandro ilay zazavavy no lasa. Miantso ho amin'ny fitadiavam-bahaolana hentitra sy lovain-jafy amin'ity olan'ny zavo-tsetroka Indoneziana ity ny Greenpeace.
Nipaka hatrany Malayzia sy Singapaoro ny zavo-tsetroka
Nitaraina tamin'ny fiverenan'ny zavo-tsetroka avy amin'ny doro-tanetin'i Indonezia ny Singapaoreana sy ny Malayziana tao anatin'ny andro vitsy izay. Ny sasany nampiasa hatsikana hamariparitana ny fiantraikan'ny setroka amin'ny tanànan-dry zareo.
Tsy mahasalama ankehitriny ny haavon'ny zavo-tsetroka ao Singapaoro ATSIMO
Ny voatran'ny haagen daz eto Singapaoro dia [zavotsetroka sy vovoka]
Evinevina tsy voasakana sy orona mangidihidy. Indonezia ô, atsaharo ny mandoro ala. Mahamenatra…
Mpihazakazaka Zavotsetroka: Ny Fitsarana Mahamay (Malayzia)
Ahoana ny hanaovana trondro mendin-tsetroka eto SG: Apetraho eo ivelan'ny varavarankelinao ny didin-trondro iray. Miandrasa 10 minitra.
Raha avy ao Indonezia ny afo, dia orinasa fanodinana menaka voanio, tohanan'ny orinasa avy any Malayzia sy Singapaoro kosa, ireo mpanimba ala. Izany no mahatonga ny zavo-tretroka avy any an'ala tsy ho olana indoneziana fotsiny ihany fa mivelatra kokoa any amin'ny sehatra ara-paritra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/14/74494/
 Olana mpitranga isan-taona: https://globalvoicesonline.org/2014/03/18/riau-forest-fire-triggers-worst-indonesia-haze-pollution/
 no nanambara: https://www.facebook.com/GreenpeaceIndonesia/photos/a.188166854960.125012.40481759960/10153480847124961/?type=1&permPage=1